ezaposwa ngomhla 01 / 25 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
I-mesterolone ebomvu i-powder crystalline, emhlophe ukuba iluhlaza kwaye ayichithe emanzini. Iyaziwa ngokubizwa ngegama layo, igama leproviron. Iproviron nganye ipilisi / ipilisi iqulethe nge-25mg powderolone powderNgokungafani nezinye i-steroids, i-Mesterolone eluhlaza inobuthakathaka kakhulu okanye i-zero anabolic. Ngenxa yesi sizathu, akudluliselwa kuyo anabolic steroid. Kulawulwa ngomlomo ngaloo ndlela ayikho injection ye-mesterolone.
Ukucima i-Mesterolone i-1934. Ilinganiswa phakathi kwe-steroids endala esebenzisana kunye ne-Methyltestosterone kunye ne-Testosterone Propionate eye yaphuhliswa kwaye isetyenziswa kwiyeza kwi-1935 kunye ne-1937 ngokulandelanayo. I-Testosterone propionate kunye ne-Methyltestosterone zaziwa kakhulu ngenxa yemisebenzi yazo ene-anabolic eqinile. Iproviron ithathwa njengobuthakathaka be-steroid ngoko ukutyekela kwayo akuzange kufane nokuthelekiswa nezinye i-steroids ezimbini.
Kwimichiza, i-mesterolone (Proviron) yayisetyenziselwa ukulungisa ukungapheli. Nangona ezinye i-androgenic okanye i-anabolic steroids zikhusela i-gonadotropins enomdla obangela ukungapheli kwexesha elifutshane, i-proviron, xa isetyenzisiwe kumanqanaba athile ayichaphazeli amanqanaba e-LH emzimbeni. Nangona kunjalo, kulungile ukuba kungenjalo ukuba iProvenon ayiphakamisi amanqanaba e-LH njengabantu abathile bakholelwa ukukholelwa. Ngokomphando, iMesterolone ikhuthaza i-spermatogenesis kwiimvavanyo ngokubonelela ngemiphumo ye-androgenic efunekayo kule nkqubo.
I-Proviron steroid iyingqayizivele ngendlela yayo kodwa ikwabelana ngezinye iimpawu kunye noWinstrol, Masteron no-Anavar. Ukusebenza ngokuhlakanipha, i-Mesterolone ayisetyenziswanga ukukhulisa umxube we-muscle mass. Nangona kunjalo, idlala indima ebalulekileyo ngexesha lokujikeleza. Ukusetyenziswa kwayo kuhambelana nemigangatho yokusika, nangona, umsebenzi wayo uhlukile kwili nqanaba.
Ukuthelekisa ne testosterone, iMesterolone inomlinganiselo we-anabolic kunye ne-androgenic ye-100-150 kunye ne-30-40 ngokulandelanayo. Iingqinisiso zeTesttosterone kwi-100 kwicandelo ngalinye. Ngaphandle kwezinga eliphezulu le-anabolic, iMesterolone ibonisa imisebenzi encinane ye-anabolic kune-testosterone. Icala elifanayo liya eHalotestin eyaziwa ngokuba ngumlinganiselo ophezulu we-anabolic kodwa umsebenzi ophantsi we-anabolic. Ukulinganisa kwe-proviron kunye ne-androgenic ngamanye amaxesha kunciphisa amanqanaba omsebenzi we-androgenic.
I-Raw Proviron (iMesterolone) inzuzo ekwakheni umzimba (Yintoni eyenziwa nguProviron?)
I-Mesterolone ebomvu isetyenziswe kakuhle, ngababakhi bomzimba, ngexesha lokujikeleza. Ngeli nqanaba, ibonisa izinto ezinzima ezifana nezo ze-Masteron. Nangona, inzuzo yayo ebaluleke kakhulu kukukwazi ukuphucula ukusebenza kanzima kwezinye i-steroids ezifakwe kwi-stack. I-Proviron ibophelela ngokuqinile kwi-androgen receptor eyenza umsebenzisi atshise amafutha omzimba ngokukhawuleza nangakumbi ngokufanelekileyo. Ukuqwalasela imiphumo ye-proviron ye-anti-estrogenic, abasebenzisi baya kubanjelwa ubuncinci bokugcinwa kwamanzi, kwaye mhlawumbi, akusayi kubakho mfuneko yokubandakanya i-anti-esrogen yendabuko kwi-stack. Kwakhona, i-proviron yandisa inani le-testosterone yamahhala. Oku kuncedo olukhulu kuba ama-testosterone amanqanaba aphantsi apha ngeli xesha lokusebenzisa i-anabolic steroid. Iziphumo ziya kuba ziphakamileyo kubantu ababandakanya i-Proviron xa kwiqondo elisezantsi le-testosterone lilinganiswa nabasebenzisi abangenalo. Ngokucacileyo, inzuzo enkulu ye-mesterolone ngexesha lomjikelezo wokusika yikhono layo lokuphucula i-androgenicity yezinye i-steroids ezibandakanyiweyo kwi-stack ngenjongo yokuqina komzimba. Ziphumo ze I proviron isilinganiso iyakwazi kuphela ukuba umsebenzisi uncike.
Ukusetyenziswa kwe-steroid kunokuba nzima kakhulu xa abasebenzisi kufuneka bajongane nokunambitheka kunye nemiphumo elandelayo. Le yinkqubo apho i-testosterone emzimbeni okanye leyo elawulwa ngayo i-steroids iguqulwa ibe yi-estrogen. Iimiphumo ezilandelayo ziquka ukugcinwa kwamanzi, ukuzuza ubunzima, i-gynecomastia, ukunyuka kwama-hormonal phakathi kwabanye. I-Estrogen iphinda ivuselele imveliso ye-hormone yokunyamezela i-anabolic, ebizwa ngokuba yi-cortisol.
Ukufikelela kwiziphumo eziphezulu, izixhobo zomzimba zithatha i-anabolic kunye ne-androgenic steroids ngeProviron steroid. Okokuqala, njengoko kukhankanywe ngaphambili, kuthintela iziphumo zecala ze-estrogenic. Okwesibini, i-Proviron idlala indima ye-catalyst yezinye i-steroids ezenza ziphumelele. Inokwenza oku kuba ibophelela kwiimvumi ze-androgen kwindlela yomzimba. Ekuhambeni kwexesha, zonke i-steroids zongezwa kwi-stack zisebenza ngokubanzi. Umzekelo xa usebenzisa kunye Anavar okanye Androlic Steroid.
Mesterolone 1424-00-6 lonyango elifanelekileyo kumntu ongaphantsi komntwana okanye imeko yokungabi nantlungu. Kwiimeko ezininzi, le ngxaki iveliswa ngamanqanaba athatywayo. Nangona iinkcukacha malunga nokungabikho komntwana kunye nokuzala akucaci kakuhle, kukholelwa ukuba ukuveliswa kwesilisa kuxhomekeke kwi-gonadotrophins kunye ne-androgens, umzekelo, i-testosterone. Ezi hormone zinoxanduva lokuvuselela izitho zesini. Iproviron, ngakolunye uhlangothi, ivuselela i-androgens kodwa ayichaphazeli i-gonadotrophins. Oku kuguqulela ukuzalisa i-Proviron isibalo sesibindi sokukhuthaza ukuzala.
Mesterolone, owona mculo ophezulu we-anabolic steroid, isetyenziswe ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo; ngenjongo yezonyango ukunyanga ukugula kunye nokwakha umzimba. Iintlobo zeProviron zininzi kodwa ziyakonwabela kuphela xa i-dosage ezifanelekileyo zilawulwa. Amanqanaba atyunyiwe kwinjongo nganye iya kuxutyushwa ngezantsi.
I-tablet ye-25mg imele ithathwe ngosuku lwesithathu ukunyanga amandla kunye nokunciphisa impawu zesini zesini. Isilinganisi samanani kufuneka sibe ngu-75mg ngosuku. Le milingo ilawulwa kwiinqanaba zokuqala zonyango. Umyinge uyanciphisa i-25 mg tablet rhoqo emva kwexesha kunye nexesha. Isilingo esifanayo seProviron sisetyenziselwa ukunyanga ukungabikho komntwana. Amanye amayeza asetyenziswa kunye neProviron ukuphumeza iziphumo ezilungileyo.
Abaqulunqi bomzimba abaphucula ukusebenza basebenzisa i-50mg kwi-150mg imihla ngemihla. Ngokomphando, i-Proviron ye-half-life ranges phakathi kwe-12 ukuya kwii-13 iiyure. Injongo ephambili yale mlingo kukunciphisa amanqanaba okugcinwa kwamanzi, okubangelwa yi-estrogen. Kwakhona, le milingo iqinisekisa ukuba inqanaba le-testosterone kwisistim somzimba ludinga ukukhusela nayiphi na amathuba okungafumaneki emva komjikelezo. Kwiimeko ezininzi, amadoda aya kusebenzisa i-100mg ngosuku ngemilinganiselo encinci. Nangona kunjalo, ii-150mg kunye ne-100mg idayithi zemihla ngemihla ziya kuba luncedo kakhulu kwiimeko ezilinganayo. Ulawulo lwe-proviron lwamanqanaba luhlala ngokuphindaphindiweyo ukuya kwiiveki ezilishumi elinesibhozo. Ukuze unqobe ingongoma yokubambelela eyenzeka kakhulu kwiiveki zokugqibela zomjikelezo, iiveki ezintandathu zeProviron ziya kusebenza umlingo.
Abasebenzisi besibhinqa ababandakanyekayo kwimidlalo enamandla basebenzise iProviron. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwayo ngabasetyhini kudikibala kakhulu. Xa umfazi ekhetha ukuwusebenzisa, umlinganiselo we-25mg ngosuku kufuneka ukwanele ukuphucula ukubonakala kwemisipha. Ukutyiwa akufanele kudlule kwiineveki ezintlanu ngaphandle koko umsebenzisi uya kubandezeleka ngemiphumo yecala. Proviron nokukhulelwa akuhambelani. Oomama abakhulelweyo nabancelisayo kufuneka bahlale beli liyeza.
Ukuba uceba ukusebenzisa i-Proviron, ukuyibeka kunye nezinye i-steroids kuya kukwenza okulungileyo kunokuba ulimale. Abantu baseMesterolone nabo bafuna iWinstrol, iAndrolic, i-Primobolan, i-Anavar kunye ne-Masteron, esebenza kakuhle neziyobisi ngexesha lokusika. Ikhuthaza i-androgenicity ye-steroids esetyenziswe kwisitokethi ukunika i-physique enzima. Abanye abasebenzisi bangayifaka kwisijikelezo sokubhukuda ukuba kubonakala kunenzuzo kubo.
Abadlali bomzimba kunye nabathambile abasebenzisa iProviron njengequmrhu elixhasayo bathabatha umyinge we-50mg ukuya kwi-100mg yonke imihla kulo lonke ixesha. Kule ngongoma, akukho mingcipheko kwixesha elithatyathwa ngalo. I-Proviron PCT inokuphinda isebenze kwabanye abaqulunqa umzimba. Benza njalo ukwenzela ukunciphisa amanqanaba e-estrogen nokuphucula ukuzala. Nangona oku akusiyo isigqibo esibi, kukho ezinye iziyobisi ezichanekileyo ezineziphumo ezinamandla ezingasetyenziswa ngexesha le-PCT njenge-Nolvadex. Iproviron kufuneka igwenywe kuzo zonke iindleko ukuba kukho umngcipheko wokunciphisa ukuveliswa kwe testosterone emzimbeni.
I-Raw Proviron (i-mesterolone) Iimiphumo ezingezantsi
I-Proviron yinto ekhuselekileyo ye-steroid xa kuthelekiswa namanye ama-anabolic kunye ne-androgenic steroids. Abakhi bezakhiwo bangasebenzisa le steroid kwaye banandipha inzuzo yabo ngaphandle kokujongana nayo nayiphi na imiphumo engabandezelekayo. Imiphumo embalwa yecala ingaba namava, kodwa inokwenzeka ukuba iphantsi. Iproviron yabasetyhini ayikhuthazwa kuba amanqanaba okuhlalisa aphezulu emva kokusetyenziswa. Iziphumo ezichaphazelekayo ze-mesterolone zixutyushwa ngezantsi.
Ezi ziphumo zecala leProviron zingaba zibi nakakhulu xa umsebenzisi ethatha i-mesterolone engcolileyo okanye aphethe amanani angaphezulu. Ukuphepha lo mngcipheko, abasebenzisi kufuneka bazi ukuba bathathe nini iProviron kunye nexabiso elichanekileyo.
Imithetho, imithetho nemimiselo malunga ne-steroids iyahluka phakathi kweendawo kunye namazwe. Njengokuba i-mesterolone (Proviron) ayikho, inzululwazi, i-anabolic steroid ngenxa yeempembelelo zayo ezincinci ze-anabolic, ibonwa kwaye ibhaliswe njenge-anabolic steroid kumazwe athile ngokusemthethweni. Iproviron iyaqhelekileyo kumazwe amathathu aseNtshona; eUnited States, e-United Kingdom naseKhanada.
EUnited States, i-mesterolone yamaRawudwe ibhalwe njengeShedyuli yeShedyuli ye-111 phantsi komThetho oLawulayo. Kule meko, akukho mthethweni ukufumana okanye ukusetyenziswa kweProviron kule ndawo. Ukungenisa, ukuthenga okanye ukuthengiswa kwe-anabolic steroids, i-Proviron efakwe, ithathwa njengesenzo sobugebengu.
KwiCanada, i-Proviron ibhaliswe phantsi kweShedyuli IV, njengase-UK. Oku kuthetha nje ukuba ilifa kunye nokuthengwa kwale nkomfa kuyomthetho. I-Proviron yokuRhweba ayinqatshelwe kwaye iyabonwa njengento ebuthakathaka. Abo bathengisa u-Proviron bahlawula i-$ 1000 kunye / okanye iinyanga ezintandathu zokuvalelwa entolongweni yokuqala. Abo bawenza ubugebengu obulandelayo bahlawula i $ 2000 kunye ne / okanye unyaka omnye entolongweni. Le mithetho ichazwe kwi-Canadian Controlled Drugs and Substance Act (CDSA).
Indlela elula neyona elula kakhulu yokuthenga i-proviron ihamba nge-intanethi ngokubhekiselele kubasebenzisi abaninzi. Ukuthengwa kwabathengisi bendawo kuza kukuhlawula imali. Abathengisi abaninzi be-gym abayithwali isiyobisi okanye banokubancinci. Uninzi lwabaxhasi be-intanethi baneProviron okanye ifomu yalo ngobuninzi. Amathuba okuza kwi-intanethi ye-intanethi iphakamileyo ngokukodwa xa ufuna i-brand engaphantsi komhlaba. Nangona kunjalo, oku akufanele kube njalo ukuba unokwenza uphendlo oluthile kumthengi wakho. Ngomlinganiselo omkhulu we-schering Proviron kwimarike, bekungekho nasizathu sokuba uthenge uphawu lwe-generic.
Iproviron ayininzi kakhulu kwiimarike ngokuthelekiswa nezinye izibonelelo, i-anabolic steroids okanye i-compounds. Kodwa ke kuthathwa njengequmrhu elibalulekileyo elimele lifumaneke ngokuthe xaxa kwimarike. Inani elona likhulu le-mesterolone eluhlaza lenziwe ngama-schering. Ngenxa yobume kunye nesakhiwo seProviron, kunzima ukuvelisa into yokukhohlisa. Oku akuthethi ukuba abasebenzisi akufanele baqaphele xa bethengwa. Akunjalo Proviron ukuthengiswa isikhangiso kufuneka sithembeke.
Ngokuqhelekileyo, i-Proviron ayikho indleko kakhulu, kwaye kwinqanaba elithile, lingafumaneka lula. Ukuthengwa kwiinkampani ezixuba imveliso kukubiza ngakumbi kunokuba kuthengwa ngabathengi bangaphantsi komhlaba. Oku kunjalo, kunjalo, kwimeko yazo yonke imveliso ye-Underground lab (UGL) ngokubhekiselele kwizinto ezifakwe kwiyeza. Ngokomzekelo, ukuCima ukuthengisa i-25mg Proviron kwi-$ 0.83; Ezinye iinkampani zonyango zizithengisa kwi-$ 0.75. Lebhu yangaphantsi (UGL); Ngakolunye uhlangothi, thengisa i-25mg Proviron ye-$ 0.50.also, iilabhu zangaphantsi zingase zenze i-proviron kwiinkcenkcesho ezahlukeneyo ezifana ne-100mg, 50mg, 25mg okanye ye-20mg. Umgangatho wezinto ezininzi ezenziwe ngaphantsi komhlaba ungathandabuzeki ngoko ukuthelekisa amaxabiso kunye nezinto zokuxuba iimveliso zengxaki.
Ukufumana isibonelelo esinokwethenjelwa esithengisa i-Proviron esisemthethweni ngamanye amaxesha kungase kube ngumsebenzi onzima. I-Proviron ethengiswayo okanye i-mesterolone ekuthengiseni izikhangiso zikho kwi-intanethi. Abasebenzisi akufuneki bathenge nayiphi na imveliso ngaphandle kokwenza ingqalelo yengxelo yomthengisi. Nangona kunjalo, unokuthenga kalula iPrownon online kwi-market yethu. Kwi-Steroid.com, sinika i-anabolics esemthethweni efumaneka ngokusemthethweni ngaphandle kwemvume. Amanani ethu afikelelekayo kwaye afanise umgangatho weemveliso zethu. Uya kuziva ukhululekile xa uthengeza iProviron ukususela ekubeni sisebenzela ibhankini evulekileyo nakwezomthetho. Abantu baseMesterolone bafuna ezinye i-anabolic steroids, esinikezela ngokusemthethweni.
Iproviron ingabi namandla njengamanye ama-anabolic steroids, kodwa iingenelo zayo ziyabonakala ekupheleni kwemijikelezo. Ndiyisebenzise kwimigangatho yokusika kwaye xa ndilungiselela ukhuphiswano. Kuze kube ngoku zonke izinto zilungile, akukho zikhalazo. Ngaphambi kokuba ndifumene le steroid, ndineengxaki kunye namanqanaba e testosterone emzimbeni wam kwaye kwafuneka ndithathe amanani amaninzi e-testosterone engapheliyo. Ngoku ukuba ndifake iProvon Bayer kwinqanaba lam, ndisebenzisa kuphela ubuncinci be testosterone kwaye ngamanye amaxesha. Ndiyayithanda into yokuba le steroid incedisa ukuba ndigcine izihlunu ezixhambileyo zakha kwiimjikelezo zam. Abaninzi bempahla yomzimba bayayinakuyinyamekela imiphumo yayo, andinakuyeka ukuyongeza kwi-stack yam. Le steroid ingcono kunezinye iiSARM endisebenzisileyo ngaphambili. Enyanisweni, ndimele ndijongane neentloko zodwa nje ngexeshana. Imoya yam kunye nesimo senhlalakahle sele iphucule kakhulu.
Yintoni eyenziwa yi-proviron? Uninzi lwabantu bacinga ukuba i-proviron (i-1424-00-6) i-steroid engenamandla. Mhlawumbi kuba bengayiqondi i-hormone okanye angayisebenzisi ngendlela efanelekileyo, unganakubona utshintsho lomlingo ngokukhawuleza ujikeleze le steroid, kodwa igalelo layo liphuza kodwa liqinisekile; ngokukodwa xa kukho ukujikeleza. Iyingqayizivele kwaye ikhethekileyo kuba abasebenzisi abavalelanga nemiphumo emibi xa besebenzisa ezinye i-anabolic steroids. Ukufumana i-masterone (Proviron) ngokusemthethweni ngaphandle kwemigomo kunokwenzeka. Abathengi bangayifumana kwiSteroid.com kumaxabiso afanelekileyo.
AJ, SL, & AA, OA (2009). I-Mesterolone (Proviron) inciphisa umgangatho we-sperm ophantsi kunye nokunciphisa iphrofayili ye-sex hormone kumntu omdala. Uphando lweNzululwazi kunye neencoko, 4(4), 320-327.
Imisinga, i-MA, ne-Content, i-U. UK Muscle yeQumrhu loKwakha.
I-Casquero, i-AC, i-Berti, i-JA, i-Teixeira, i-LLS, ne-de-Oliveira, i-HCF (i-2017). Ukuzivocavoca ingapheliyo kuyanciphisa i-CETP kunye ne-Mesterolone unyango Ukuchasisa izibonelelo zoPlasma iiPoproprotheins Profile: Studies in Pisgenic Pice. Lipids, 52(12), 981-990.